August 13, 2020 – Voice of Myanmar
အကျဉ်းထောင်တွေနဲ့ အကျဉ်းသားတွေရဲ့ လိုအပ်ချက် စုစုပေါင်း ၁၅၀နီးပါး လူအခွင့်အရေးကော်မရှင်တွေ့ရှိ
အကျဉ်းထောင်တွေနဲ့ အကျဉ်းသားတွေရဲ့ လိုအပ်ချက် စုစုပေါင်း ၁၅၀နီးပါး လူအခွင့်အရေးကော်မရှင်တွေ့ရှိ မန္တလေး၊ သြဂုတ် ၁၅-၂၀၂၀ မှူးသခင်(VOM) မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်က ကော်မရှင်စတင်ဖွဲ့စည်းချိန်ကနေ ၂၀၂၀ပြည့်နှစ် ဇူလိုင်လအထိ အကျဉ်းထောင် (၁၀)ခု ၊ အကျဉ်းစခန်း (၈)ခု ၊ ရဲစခန်း အချုပ်ခန်း (၈)ခု ၊ တရားရုံးအချုပ်ခန်း (၇)ခု နဲ့ ဆေးရုံအချုပ်ခန်း (၅)ခုတို့ကို သွားရောက်စစ်ဆေးခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ အကျဉ်းထောင် ၊ အကျဉ်းစခန်း ၊ အချုပ်ခန်းများ ကြည့်ရှုစစ်ဆေးချိန်မှာ စစ်ဆေးရေးအဖွဲ့နဲ့ တွေ့လိုတဲ့ အကျဉ်းသူ/ အကျဉ်းသား ၊အချုပ်သား/ အချုပ်သူ (၃၆၁)ဦးကို သီးခြားတွေ့ဆုံခဲ့ပြီး သူတို့၏ အခက်အခဲများ လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်ခံရမှုများ ၊ တရားရေးဆိုင်ရာ တင်ပြချက်များအပေါ် မှတ်သားစီစစ်ပြီး တွေ့ရှိချက်တွေကို အကြံပြုချက်တွေကို ပြည်ထောင်စုအဆင့် အဖွဲ့အစည်းများကို အကြောင်ကြားတာတွေလုပ်ထားတယ်လို့ သိရပါတယ်။ အကြံပြုချက်တွေထဲမှာ…
၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲမှာ မသန်စွမ်းဦးရေ တစ်သိန်းနဲ့အထက် မဲပေးနိုင်ဖို့မျှော်မှန်း
၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲမှာ မသန်စွမ်းဦးရေ တစ်သိန်းနဲ့အထက် မဲပေးနိုင်ဖို့မျှော်မှန်း ရန်ကုန်၊ သြဂုတ် ၁၄-၂၀၂၀ ကျော်ကျော်(VOM) နိုဝင်ဘာမှာကျင်းပမယ့် ၂၀၂၀ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမှာ မသန်စွမ်းဦးရေ တစ်သိန်းနဲ့အထက် မဲပေးနိုင်ဖို့မျှော်မှန်းထားတယ်လို့ ရွှေမင်းသားဖောင်ဒေးရှင်း(မြန်မာ)ဥက္ကဋ္ဌ ဦးမြတ်သူဝင်းက ပြောပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၅ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမှာ မသန်စွမ်းဦးရေ ၅၀၀ ကနေ ၈၀၀ ကြားသာမဲပေးနိုင်ခဲ့ပေမယ့် ၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲအတွက် အခြေခံမဲစာရင်းမှာတော့ မသန်စွမ်းဦးရေ ရှစ်သောင်းကျော်ပါဝင်နေတာဖြစ်ပြီး တစ်သိန်းခန့်အထိ မဲပေးနိုင်ဖို့မျှော်မှန်းထားတာဖြစ်ပါတယ်။ “မသန်စွမ်းဦးရေတစ်သိန်းအထက်ကို မဲပေးနိုင်ဖို့မှန်းထားတယ်။ အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီး ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်နဲ့ရော အရပ်ဖက် အဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ရော ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်နေတာရှိတယ်။ ၂၀၁၅ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲနဲ့ နှိုင်းယှဉ်ရင် လာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲမှာ မဲပေချင်တဲ့ မသန်စွမ်းသူဦးရေအများကြီးတက်လာပါတယ်”လို့ ဦးမြတ်သူဝင်းကပြောပါတယ်။ နိုင်ငံရဲ့ အရွေ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ ၅နှစ်တစ်ခါသာကြုံ့တွေ့ရတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲမှာ မသန်စွမ်းတွေလည်းမဲပေးဖို့ နိုင်ငံသားအခွင့်အရေးပေးအပ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် ပထမအသုတ်အခြေခံမဲစာရင်းထဲမှာ ကျန်ရှိခဲ့တဲ့သူတွေ နီးစပ်ရာမသန်စွမ်းအဖွဲ့တွေကို ဆက်သွယ်ဖို့လိုတယ်လို့ ဦးမြတ်သူဝင်းက အကြံပြုပြောပါတယ်။ ၂၀၂၀…
မာကျူရီဟိုတယ်က ဝန်ထမ်းတချို့ ရာထူးနဲ့မညီတဲ့အလုပ်တွေ လုပ်နေရတဲ့အတွက် ကျေနပ်မှုမရှိ
မာကျူရီဟိုတယ်က ဝန်ထမ်းတချို့ ရာထူးနဲ့မညီတဲ့အလုပ်တွေ လုပ်နေရတဲ့အတွက် ကျေနပ်မှုမရှိ မန္တလေး၊ သြဂုတ် ၁၃-၂၀၂၀ ဟိန်းကို(VOM) မန္တလေးမြို့၊ အောင်မြေသာစံမြို့နယ်၊ မန္တလေးတောင်ခြေအနီးက မာကျူရီဟိုတယ်က ဝန်ထမ်းတချို့ဟာ ရာထူးနဲ့မညီဘဲ ရုံးတွင်းပိုင်းပြုပြင်နေတဲ့ ဆေးသုတ်ခြင်း၊ အုတ်သယ်ခြင်း လုပ်ငန်းတွေကို အမျိုးသမီးဝန်ထမ်းတွေကပါ လုပ်ဆောင်နေရတာကို ကျေနပ်မှုမရှိဘူးလို့ သိရပါတယ်။ အခုလို ရာထူးနဲ့မညီဘဲ အလုပ်ခိုင်းစေတာတွေကို ကျေနပ်မှုမရှိတဲ့အတွက် ဟိုတယ်ဝန်ထမ်းအချို့ဟာ ဒီကနေ့မနက်ပိုင်းက သတင်းမီဒီယာတွေကို ပြောပြခဲ့ပြီး အောင်မြေသာစံမြို့နယ် အလုပ်သမားညှိနိူင်းဖျန်ဖြေရေးအဖွဲ့ကို သွားရောက်တိုင်ကြားသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ အခုလိုဖြစ်တာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး မာကျူရီဟိုတယ်က တာဝန်ရှိသူကိုမေးမြန်းဖို့အတွက် VOMသတင်းဌာနကနေ ဟိုတယ်ကိုသွားရောက်မေးမြန်းရာမှာတော့ လတ်တလောမှာတော့ ဘာမှပြောစရာမရှိသေးပါဘူး ၊ မေးမြန်းစရာတွေကို E-mailကနေပဲမေးပေးပါလို့ ဟိုတယ်ကတာဝန်ရှိသူ အမျိုးသမီးတစ်ဦးက လာရောက်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီလိုပြောဆိုခဲ့တဲ့အတွက် မာကျူရီဟိုတယ်ကို E-mailနဲ့ဆက်သွယ်မေးမြန်းရာမှာတော့ အကြောင်းပြန်ဖြေကြားတာ မရှိသေးပါဘူး။ လက်ရှိ မာကျူရီဟိုတယ်မှာ ဝန်ထမ်းအင်အား ၂၀၀နီးပါး ကျန်ရှိနေပြီး ကိုဗစ်ကာလမှာ နစ်နာကြေးပေးပြီး အလုပ်ထုတ်ထားတဲ့ဝန်ထမ်း…
ဘရာဇီးကနေ တရုတ်ကိုပို့တဲ့ အေးခဲကြက်တောင်ပံတွေမှာ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်တွေ့
ဘရာဇီးကနေ တရုတ်ကိုပို့တဲ့ အေးခဲကြက်တောင်ပံတွေမှာ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်တွေ့ ပေကျင်း၊ သြဂုတ်-၁၃-၂၀၂၀ မျိုးဆက် (VOM) တရုတ်နိုင်ငံတောင်ပိုင်း၊ ရှန်ကျန်းမြို့မှာ ဘရာဇီးနိုင်ငံကနေ တရုတ်နိုင်ငံကို တင်သွင်းတဲ့ အေးခဲကြက်တောင်ပံနမူနာတစ်ခုမှာ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကို စစ်ဆေးတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့ ရှန်ကျန်းမြို့တာဝန်ရှိသူတွေက သြဂုတ် ၁၃ ရက်မှာ ပြောပါတယ်။ ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်နိုင်ခြေရှိတဲ့ အဲ့ဒီအေးခဲကြက်သားတွေနဲ့ ထိတွေ့ခဲ့တဲ့သူအားလုံးကို ရှန်ကျန်းအာဏာပိုင်တွေက ခြေရာခံ စမ်းသပ်စစ်ဆေးခဲ့ရာ ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုမရှိဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ တရုတ်နိုင်ငံကို အီကွေဒေါနိုင်ငံကနေ တင်သွင်းတဲ့ အေးခဲပုဇွန်တွေမှာလည်း ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကို စစ်ဆေးတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့ တရုတ်နိုင်ငံ သြဂုတ် ၁၂ ရက်မှာ ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ ရှန်မန်၊ ဒါလီယန်ဆိပ်ကမ်းမြို့တွေအပါဝင် အခြားတရုတ်မြို့ကြီးတွေမှာလည်း ဇူလိုင်လအတွင်းက ဒီလိုဖြစ်စဉ်တွေကြောင့် အီကွေဒေါနိုင်ငံကနေ ပုဇွန်တင်သွင်းမှုတွေကို တရုတ်အစိုးရက ချက်ချင်းရပ်တန့်ခဲ့ပါတယ်။ တရုတ်နိုင်ငံမှာ ဝူဟန်မြိုကနေစတင်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ဟာ နိုင်ငံအတွင်းမှာ ဇွန်လအတွင်းက ကူးစက်မှုတွေ ပြန်လည်ဖြစ်ပွားခဲ့တာကြောင့် အဓိကဆိပ်ကမ်းတွေမှာရှိတဲ့ အသားနဲ့ ပင်လယ်စာတင်သွင်းမှုတွေကို တရုတ်အစိုးရက တင်းတင်းကြပ်ကြပ်…
Covid19 ရောဂါကုသပျောက်ကင်းတာ ၆လကျော်ကြာရှိတဲ့အမျိုးသမီးမှာ ရောဂါပိုး ပြန်တွေ့
Covid19 ရောဂါကုသပျောက်ကင်းတာ ၆လကျော်ကြာရှိတဲ့အမျိုးသမီးမှာ ရောဂါပိုး ပြန်တွေ့ ဂျင်ဂျုံ ၊ ဩဂုတ် -၁၃-၂၀၂၀ လဲ့လဲ့ဝင်း (VOM) ဩဂုတ်၉ရက်နေ့က ဟူးပိန့်ပြည်နယ် ၊ ဂျင်ဂျုံမြို့က အသက် ၆၈နှစ် အရွယ်အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ဟာ ဂျင်ဂျုံမြို့က ဆေးရုံမှာ နေမကောင်းလို့ ဆေးကုသမှုခံရင်း စစ်ဆေးကြည့်တဲ့အခါမှာ Covid‌19 ရောဂါပိုး ပြန်တွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီအမျိုးသမီးဟာ ဖေဖေါ်ဝါရီ ၈ ရက်နေ့က Covid‌19ရောဂါကုသပျောက်ကင်းခဲ့သူဖြစ်ပြီး ခုလို ၆လကျော်ကြာမှ Covid‌19ရောဂါပိုး ပြန်လည်တွေ့ရှိတာကြောင့် ဆရာဝန်တွေအံ့ဩစေရပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် အဲဒီအမျိုးသမီးနဲ့ ထိတွေ့သူတွေကို စစ်ဆေးတဲ့အခါမှာတော့ ရောဂါကူးစက်ခံရတာမရှိဘူးလို့ ဒေသတွင်းသတင်းတွေက ရေးသားကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ရောဂါထပ်မံကူးဆက်မပြန့်ပွားစေဖို့ ဝေဒနာရှင်အမျိုးသမီးနေတဲ့အိမ်နဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ကို ပိုးသတ်ဆေးဖြန်းတာ အသွားအလာကန့်သတ်တာတွေလုပ်ပြီး ထိန်းချုပ်ထားနိုင်တယ်လို့ သက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်တွေက ပြောပါတယ်။ ဩဂုတ်လ ၁၂ရက် ညပိုင်းအချိန်ထိ တရုတ်နိုင်ငံက ပြည်နယ် ၃၁ ခုမှာ ကူးစက်ခံရသူစုစုပေါင်း…
ကမ္ဘာ့ပထမဆုံး ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါကာကွယ်ဆေးအပေါ် စိုးရိမ်ပူပန်မှု အခြေအမြစ်မရှိဘူးလို့ ရုရှားတုံ့ပြန်
ကမ္ဘာ့ပထမဆုံး ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါကာကွယ်ဆေးအပေါ် စိုးရိမ်ပူပန်မှု အခြေအမြစ်မရှိဘူးလို့ ရုရှားတုံ့ပြန် မော်စကို၊ သြဂုတ်-၁၃-၂၀၂၀ မျိုးဆက် (VOM) ရုရှားနိုင်ငံထုတ် ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါကာကွယ်ဆေးရဲ့ ဘေးကင်းလုံခြုံမှုအပေါ် နိုင်ငံတကာက စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေ မြင့်တက်နေတာဟာ လုံးဝအခြေအမြစ်မရှိဘူးလို့ ရုရှားနိုင်ငံက ပယ်ချလိုက်ပါတယ်။ အဲဒီဆေးကို လူသားတွေနဲ့ စမ်းသပ်ပြီး နှစ်လအကြာမှာ စည်းမျဉ်းဆိုင်ရာတွေကို ခွင့်ပြုပေးခဲ့တယ်လို့ ရုရှားနိုင်ငံက သြဂုတ် ၁၁ ရက်မှာ ကြေညာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ရုရှားနိုင်ငံက ကာကွယ်ဆေးကိုအလျှင်အမြန်ထုတ်လုပ်မှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကျွမ်းကျင်သူတွေရဲ့ စိုးရိမ်ပူပြန်မှုတွေ အလျှင်အမြန်မြင့်တက်နေပြီး ကာကွယ်ဆေးအပေါ် သံသယရှိတယ်လို့ ထုတ်ဖော်ပြောဆိုတဲ့ နိုင်ငံတွေလည်း တိုးပွားလာနေပါတယ်။ ဂျာမနီ၊ ပြင်သစ်၊ စပိန်နဲ့ အမေရိကန်တို့မှသိပ္ပံပညာရှင်တွေကလည်း ကာကွယ်ဆေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သတိထားကြဖို့ တိုက်တွန်းထားပါတယ်။ ရုရှားကျန်းမာရေးဝန်ကြီး မီခေးမာရာရှာကိုကတော့ အခြားနိုင်ငံတွေဟာ ရုရှားနိုင်ငံထုတ်ကာကွယ်ဆေးရဲ့ တိကျတဲ့ယှဉ်ပြိုင်မှုအားသာချက်တွေကို သိရှိနေပြီး လုံးဝအခြေအမြစ်မရှိတဲ့ ထင်မြင်ချက်တွေကို ထုတ်ဖော်ပြောဆိုဖို့…
မြန်မာ အိန္ဒိယနယ်စပ်ကနေ ခိုးဝင်လာတဲ့ ကသည်းလူမျိုး ၅ ဦးကို မုံရွာ-ချင်းတွင်းတံတားမှာ ဖမ်းမိ
မြန်မာ အိန္ဒိယနယ်စပ်ကနေ ခိုးဝင်လာတဲ့ ကသည်းလူမျိုး ၅ ဦးကို မုံရွာ-ချင်းတွင်းတံတားမှာ ဖမ်းမိ မုံရွာ သြဂုတ် ၁၃. ၂၀၂၀ ကိုတိုးကြီး (VOM) မြန်မာ-အိန္ဒိယနယ်စပ် ခိုးဝင်ပေါက်ကနေ ခိုးဝင်လာတဲ့ အိန္ဒိယနိုင်ငံသား ကသည်းလူမျိုး အမျိုးသား လေးယောက်ကို မုံရွာ ချင်းတွင်းတံတား တက်ဂိတ်မှာ တာဝန်ကျနေတဲ့ မုံရွာမူးယစ်တပ်ဖွဲ့စုက ဖမ်းဆီးလိုက်ကြောင်း မုံရွာမြို့မရဲစခန်းကနေ သိရပါတယ်။ ‘” လဝကဦးစီးမှုး ဦးဆန်းမင်အောင်က တရားလိုပြုလုပ် တိုင်တန်းထားပါတယ် ခိုးဝင် ကသည်းလေးယောက်နဲ့ ကားသမားတစ်ယောက်ကိုတော့ မုံရွာပြည်သူ့ဆေးရုံးကြီးက ဂါတ်ဝပ်မှာ ကွာရန်တီး ၂၁ ရက်ဝင်နေပါတယ် “လို့ မုံရွာမြို့မရဲစခန်းမှုး ဒု-ရဲမှူး ဝင်းနိုင်ကပြောပါတယ်။ အထောက်အထားမဲ့ ခိုးဝင်လာတဲ့ အိန္ဒိယနိုင်ငံသား ကသည်းလူမျိုးလေးယောက်ဟာ ကလေးမြို့က ဦးကျော်ထွန်နိုင် မောင်းလာတဲ့ ကားပေါ်ကနေ ဖမ်းဆီးရမိတာဖြစ်ပါတယ်။ ဖမ်းဆီးရမိတဲ့ အိန္ဒိယ နိုင်ငံသား ကသည်းလူမျိုး လေးဦးကတော့…
အလုပ်သမား ၆ ယောက် သေဆုံးတဲ့ယာဉ်တိုက်မှုမှာ ထွက်ပြေးနေတဲ့ ယာဉ်မောင်းကို ပုဒ်မငါးခုနဲ့အရေးယူ
အလုပ်သမား ၆ ယောက် သေဆုံးတဲ့ယာဉ်တိုက်မှုမှာ ထွက်ပြေးနေတဲ့ ယာဉ်မောင်းကို ပုဒ်မငါးခုနဲ့အရေးယူ ရန်ကုန်၊ သြဂုတ် ၁၃-၂၀၂၀ အေးချမ်းသူ(VOM) ရွှေပြည်သာမြို့နယ်၊ ရေစင်မှတ်တိုင်အနီးမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ စက်ရုံကြိုပို့ယာဉ်နှစ်စီးတိုက်မှုမှာ ထွက်ပြေးနေတဲ့ power fashion အထည်ချုပ်စက်ရုံက ယာဉ်မောင်းဖြစ်သူကို ပုဒ်မငါးခုနဲ့ အမှုဖွင့်ထားတယ်လို့ ရွှေပြည်သာမြို့မရဲစခန်းကနေ သိရပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ သြဂုတ်လ ၁၀ ရက်နေ့ညပိုင်းက ရွှေပြည်သာမြို့နယ်၊ ရေစင်မှတ်တိုင်အနီးမှာ powerfashion အထည်ချုပ်က အလုပ်သမားကြိုပို့ယာဉ်ဟာ ဝါးတစ်ရာစက်မှုဇုန် YFM သိုးမွေးအထည်ချုပ်စက်ရုံက ယာဉ်ကိုတိုက်ခဲ့ရာ အလုပ်သမား ၆ ယောက်သေဆုံးခဲ့ ပြီး ၃၅ ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ ရောင်ခြည်ဦးအလုပ်သမားရေးရာအဖွဲ့က ကိုနိူင်ဌေးလွင် က ပြောပါတယ်။ “အခင်းဖြစ်တဲ့နေ့က ညပိုင်းမှာ ၅ဦးသေတယ်၊ မနက်ပိုင်းရောက်တော့ တစ်ဦးထပ်သေတယ်။ ယာဉ်မောင်းက ထွက်ပြေးနေပါတယ်”လို့ ကိုနိုင်ဌေးလွင်က ပြောပါတယ်။ ဝါးတစ်ရာစက်မှုဇုန် YFM သိုးမွှေးစက်ရုံက အိအိစိုး ၁၅…
မြန်မာသတင်း, မှုခင်း, သတင်းLeaveacomment
ကျောက်တော်ရဲစခန်းမှာ ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပြီး စခန်းမှူးသေဆုံး
2 years ago Editor Htein Lin
ကျောက်တော်ရဲစခန်းမှာ ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပြီး စခန်းမှူးသေဆုံး ကျောက်တော်၊ ဩဂုတ် ၁၃- ၂၀၂၀ ထက်အောင်စိုင်း (VOM) ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း ကျောက်တာ်မြို့မရဲစခန်းမှာ မနေ့ ညနေ ၇ နာရီလောက်က ပစ်ခတ်မှုတွေဖြစ်ပွားပြီး ကျောက်တော်မြို့မရဲစခန်းက စခန်းမှူး ဒုရဲမှူး ထွန်းနိုင်ဦး သေဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။ ကျောက်တော်မြို့မှာ အရင်ကတာဝန်ကျခဲ့ဖူးတဲ့ ရဲအရာရှိတစ်ဦးပြောပြတာက “ စခန်းမှူးကတော့ ကျသွားတာပေါ့။ ထိသွားတာပေါ့။ စခန်းမှူးက မနေ့က ဆုံးသွားတယ်။ ကျနော်တို့လည်း သတင်းကပဲ သိရတယ်။ အဲလောက်ပဲ သိရပါတယ်။ ကျန်တာမသိပါဘူး။” လို့ ပြောပါတယ်။ ဒီကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ရခိုင်ပြည်နယ် လုံခြုံရေနဲ့ နယ်စပ်ရေးရာ ဝန်ကြီးကို ဆက်သွယ်ခဲ့ ပေမယ့် မရရှိခဲ့ ပါဘူး။ ကျောက်တော်မြို့က ဒေသခံတစ်ဦးကလည်း မနေ့က ကျောက်တော်မြို့မရဲစခန်းဖက်မှာ ပစ်ခတ်သံတွေကြားကြောင်းနဲ့ အရာရှိတစ်ယောက် ပစ်ခတ်ခံရကြောင်း ပြောပါတယ်။ ” အသေးစိတ်ကို ကျနော်တို့လည်း…
May 24, 2022 Editor
စဥ့်ကူးမြို့နယ်မှာ မိုးကြိုးပစ်ခံရလို့ အမျိုးသမီး ၂ ဦး သေဆုံး၊ ၂ ဦး ဒဏ်ရာရ
NLD လက်ထက်က သမ္မတရုံးညွန်ချုပ် ဦးဇော်ဌေး ရဲ့ စျာပနအခမ်းအနား.
ပြည်တွင်း စားနပ်ရိက္ခာဖူလုံရေးအတွက် မလေးရှားက ပြည်ပသို့ ကြက်တင်ပို့မှုရပ်ဆိုင်း
ရုရှားတပ်ဖွဲ့၀င်တဦးကို စစ်ရာဇ၀တ်မှုနဲ့ ယူကရိန်းတရားရုံးက တစ်သက်တစ်ကျွန်း ပြစ်ဒဏ်ချ
ပိတောက်သားတွေ သယ်လာတဲ့ မြန်မာကုန်တင်သင်္ဘောနှစ်စင်းကို ပီနန်ရေပိုင်နက်မှာ မလေးရှားအာဏာပိုင်တွေ ဖမ်းဆီး
ဒီနှစ်မှာ သွေးလွန်တုပ်ကွေးရောဂါဖြစ်ပွားမှု ထူးကဲများပြားနိုင်တယ်လို့ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကနေ သိရ
မျောက်ကျောက်ရောဂါက မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဖြစ်ပွားနိုင်ခြေနည်းပါးတယ်လို့ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးပြော
ငရုတ်စိုက်ဖို့သွားတဲ့ အမျိုးသမီး ၅ ဦး မိုးကြိုးပစ်ခံရပြီး သေဆုံး